Deg Deg: Ciidamada PSF oo dhufeyso qotay, cabsi soo wajahday Saciid Deni iyo xaalad culus oo ka taagan Boosaaso – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 26 November 2021 26 November 2021
Madaxda Hay’adda PSF ayaa maanta mar kale ku celisay in aysan aqoonsanayn xilka qaadistii Madaxweyne Siciid Deni ku sameeyay Agaasimaha PSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano.
Warkan ayaa ku soo beegmay saacado kooban kadib markii mas’uuliyiin ka tirsan Puntland oo uu kamid yahay wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan uu sheegay iney Boosaaso u imaadaan xil wareejinta hay’adda PSF balse aysan wali u hergelin.
Ciidamada PSF ayaa ah kuwa si aad ah u diyaarsan islamarkana loogu talagalaya la dagaalanka argagaixsasda iyo sugidda amniga Puntland waxaana muuqata in Saciid Deni uu doonayo inuu siyaasad u adeegsado taa ciidanka si isku mid ah ay uga soo hor jeesteen.
Dhanka kale ciidamadan waxaa taageera dhamaan shacabka reer Puntland iyadoo laga cabsi qabo iney duulaan ku qaadaan madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo afaarahooda soo galay.